Shwe Thoon 8 Online Media – Page5– Shwe Thoon 8 is favourite news, entertainment, and lifestyle website.
ရဲတပ်ဖွဲ့ကို ကိုအောင်ကြီး တရားစွဲဆိုထားသည့် သိန်း ၅၀၀၀ နစ်နာကြေးအမှု ရဲချုပ်ကိုယ်တိုင် ရှင်းရမည် …
December 21, 2020 December 21, 2020 shwe0Comments
ကိုအောင်ကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ကို တရားစွဲဆိုထားသည့် သိန်း ၅၀၀၀ နစ်နာကြေးအမှု ရဲချုပ်ကိုယ်တိုင် ရှင်းရမည် နေပြည်တော်မှ နိုင်ငံကျော် ဗစ်တိုးရီးယား သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွင် မှားယွင်းအဖမ်းခံခဲ့ရသည့် ကိုအောင်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကို နစ်နာမှုအတွက် လျော်ကြေးကျပ် သိန်း ၅၀၀၀ တောင်းဆိုထားသည့်
လေးဖကျနာရောဂါအတှကျအလှနျအစှမျးထကျတဲ့သဘာဝဆေးနညျး မွနျမာပွညျမှာ အဖွဈအမြားဆုံး လေးဖကျနာရောဂါ အတှကျပါ တဆငျ့မြှဝပေေးကွပါ ။ လေးဘကျနာအတှကျ သဘာဝဆေးကောငျးတဈလကျ လေးဘကျနာ၊ အဆဈမွဈနာနှငျ့ အကွောရောဂါဝဒေနာမြားအတှကျ သဘာဝဆေးနညျးကောငျးလေးကို ကနျြးမာရေးသတငျးမြားမှ မြှဝပေေးလိုကျတယျ။ ဆေးနညျး- (၁) ရှောကျသီးတဈခွမျးကို ထမငျးစားဇှနျး တဈဇှနျးခနျ့ရအောငျ
စီးပှားရေး ငှရေေးကွေးရေး လာဘျလာဘ အဆငျပွစေရေနျ .
စီးပှားရေး ငှရေေးကွေးရေး လာဘျလာဘ အဆငျပွစေရေနျ ပရုပျ ထောပတျ မီးထှနျးအစီအရငျ ယခုဖွဈပကျြနတေဲ့ မိတျဆှတေို့၏အနာဂါတျအရေး မသခြောမရရောဖွဈနသေညျ့ ပစ်စုပ်ပနျကပျဘေးကာလတှငျ မဝခှေဲနိုငျသော၊ စိတျဆုံးဖွတျခကျြခမြရသောကိစ်စမြား ဖွဈနကွေမယျဆိုတာကို တှေးမိနပေါတယျ။ ထို့ကွောငျ့စှနျ့စားလုပျကိုငျနထေိုငျနရေသူမြားကလညျး အမှားအယှငျးတှဖွေဈတတျပွီး ဘဝအတကျအကြ မွနျတတျသညျ့ကာလပါ။ စီးပှားရှာရာတှငျ
ဆံပငျဖွူတှကေိုပွနျနကျစပွေီး နောကျထပျဆံပငျဖွူပွနျမပေါကျစတေဲ့သဘာဝနညျးလမျးကောငျး …
ဆံပငျဖွူတှကေိုပွနျနကျစပွေီး နောကျထပျဆံပငျဖွူပွနျမပေါကျစတေဲ့သဘာဝနညျးလမျးကောငျး ဆံပငျဖွူမြား ပွနျနကျစဖေို့ ဦးရပွေားမြား ဓာတု ဆေးဝါး ကငျးစဖေို့နညျးလမျးကောငျးပါ။ ရှားစောငျးလကျပတျကို ပါးပါးလှီးပွီးအုနျးဆီထဲမှာ မီးအေးအေးနဲ့ အညိုရောငျသမျးပွီး နှမျးသှားသညျအထိ ကွျော ပွီးလြှငျ အဖတျမြားကို ဆယျယူပွီး ကနျြရှိသော အုနျးဆီသကျသကျကို ကွကျသှနျနီ
ရကျကိုးဆယျအတှငျး လာဘျရှငျစသေောနညျး ..
ရကျကိုးဆယျအတှငျး လာဘျရှငျစသေောနညျး လုပျအားကွောငျ့ငှဝေငျတာရယျ၊ ကိုယျ့လုပျငနျးက ပုံမှနျဝငျငှကေောငျးနတောရယျ၊အရောငျးအဝယျကိစ်စမြား အောငျမွငျလို့ ငှဝေငျတာတှကေို လူတှကေ သိပျပွီး မရောငျ့ရဲ မတငျးတိမျနိုငျကွဘူး။ မြားသောအားဖွငျ့ ကံတရားကွောငျ့ ငှအေစုလိုကျအပွုံလိုကျ ဝငျတာကိုလညျး လိုလားတောငျ့တာကွတယျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ အခှငျ့အရေးကောငျးကွုံလို့ ဖွဈစေ၊ ထီပေါကျခြဲပေါကျ
မြန်မာပြည်က ခွေးရုပ်နဲ့ ဝက်ရုပ် (ခွေးနဲ့ ဝက် အတူထားလိုက်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ)…
ရုပ်နှစ်ရုပ် ရုရှားနိုင်ငံသို့ရောက်နေသည့် ဧည့်သည်တစ်ဦးသည် ပြည်တော်ပြန်လက်ဆောင်အတွက် ရှေးဟောင်း ပစ္စည်းဆိုင် တစ်ဆိုင်ကို ဝင်လာပြီး လျှောက်ကြည့်နေသည်။ သူက ဆိုင်ထောင့်တစ်နေရာတွင် စားပွဲပေါ် တင်ထားသည့် ခွေးရုပ်ကို စိတ်ဝင်စားစွာ ကြည့်နေသည်။ ခွေးရုပ်ဘေးတွင် ဝက်ရုပ်လေးတစ်ရုပ်ကလည်း ရှိနေသည်။ ဧည့်သည်က
တရားတပုဒ်ကြောင့် အိမ်မှာ ကိုးကွယ်ထားတဲ့ နတ်အုန်းသီးကြီးကို လွှင့်ပစ်လိုက်တဲ့ ရဟန်းအမကြီး …
တရားတပုဒ်ကြောင့် အိမ်မှာ ကိုးကွယ်ထားတဲ့ နတ်အုန်းသီးကြီးကို လွှင့်ပစ်လိုက်တဲ့ ရဟန်းအမကြီး အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ အရှင်သောပါကနှင့် အရှင်ကုမာရတို့ရဲ့ မိခင်ဒကာမကြီး ဒေါ်တင်အိဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဇင်း မန်းရွှေမြို့တော်ကြီးမှာ စာသင်စဉ်က လိုအပ်သည်များကို ထောက်ပံ့လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ဒကာမကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဇင်းတို့ စာကြည့်တိုက်မှ
မြင်းခြံမြို့က ၁၂ နှစ်အရွယ် သမီးလေး တဦး ပျောက်ဆုံးနေ၊ တွေ့ရှိသူများ အကြောင်းကြားပေးကြပါ ..
မြင်းခြံမြို့က ၁၂ နှစ်အရွယ် သမီးလေး တဦး ပျောက်ဆုံးနေ၊ တွေ့ရှိသူများ အကြောင်းကြားပေးကြပါ ကျွန်မသမီးလေး နေ့လည် ၁၂ နာရီခန့်က ပျောက်သွားပါသဖြင့် တွေ့ရှိပါက အကြောင်းကြာပေးကြပါ။ သူနဲ့အတူ မိန်းခလေး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လည်းပါသွားပါတယ်။ ဖုန်း ၀၉၄၀၂၅၂၃၈၂၇၊
ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ဗီဇပြောင်း ကိုဗစ်ပိုး ထိန်းမနိုင်ဖြစ်နေ၊ ကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုများ စတင် ..
ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ဗီဇပြောင်း ကိုဗစ်ပိုး ထိန်းမနိုင်ဖြစ်နေ၊ ကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုများ စတင် ယူကေနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သန္ဓေကွဲက ကူးစက်မှုထိန်းလို့ မနိုင်ဖြစ်နေသတဲ့။ ဗြိတိသျှကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Matt Hancock က သူတို့လည်း မြန်မြန်ဆန်ဆန်ထိန်းပေမယ့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သန္ဓေကွဲက ကူးစက်မှုထိန်းလို့ မနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့။
နိဗ္ဗာန်ယာဉ်မောင်းရင်း ထူးဆန်းစွာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ပရဟိတမင်းသားကြီး ဦးကျော်သူ ..
ထူးခြားသည့် တတိယအသုဘရှုခြင်း ယနေ့ တတိယမြောက်နာရေးကူညီမှု လမ်းကြောင်းသည်ကား ဒဂုံ(မြောက်)ရှိ အဘိုး ဦးမြင့်ဆွေ အသက်(၉၀)နှစ်၏ လမ်းကြောင်းဖြစ် ပါသည်။ အဘိုးသည် ယနေ့မနက်အစောပိုင်းတွင် တရားရှုမှတ် ရင်းဖြင့် ဘဝကူးသွားသူဖြစ်သည်နှင့် အညီ နေ့လယ် ၂:၃၀ အချိန်
အဝီစိတွင်း ( စက်ရေတွင်း ) အငှားလိုက်တူးပေးပြီး ခြစ်ခြစ်ကုပ်ကုပ် စုဆောင်း ရတာလေးနဲ့
. .အခမဲ့ဆေးကုပေးပွီး ထမငျးပါကြှေးတဲ့ ဆရာဝနျကွီးအတှကျ ဆနျအိတျတှေ လာလှူတဲ့ လယျသမားကွီး. . .
အင်ဒိုနီးရှားက လေယာဉ် Sriwijaya SJ 182 ပျက်ကျမှုမှာ တွေ့ရတဲ့ အပိုင်းအစ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းလေးက စိတ်မကောင်းဖွယ် ရင်နင့်ဖွယ် အတိပါပဲ
အစိုးရကအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း၂၅၀နှင့်မြန်မာကျပ်ငွေသန်းတစ်ထောင်ဖြင့်ကိုဗစ်-၁၉ကာကွယ်ဆေးရန်ပုံငွေစတင်တည်ထောင်ကြောင်းကြေငြာအပြီးနာရီပိုင်းအတွင်းမြန်မာ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အေဒင်ဦးချစ်ခိုင်ကအမေရိကန် ဒေါ်လာတစ်သန်းခွဲ ပွဲဦးထွက်ထည့်ဝင်လှုဒါန်း
အိန္ဒိယ ကာကွယ်ဆေး ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ရောက်ရှိမည်၊ ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးမီကာလအတွင်း ကျန်းမာရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာကြဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မေတ္တာရပ်ခံ